ठूला योजना समेट्दै प्रदेश ३ सरकार,प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० करोडको योजना – Saurahaonline.com
ठूला योजना समेट्दै प्रदेश ३ सरकार,प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० करोडको योजना
हेटौंडा,बैशाख २७ । प्रदेश ३ सरकारले ठूला योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० करोड रुपैयाँ सम्मको एक/एक वटा आयोजना छनाेट गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ।
आगामी आव २०७६/०७७ को नीति तथा योजनामा ६६ निर्वाचन क्षेत्रबाट ३३ अर्बको योजना छनाेट गरी बहुवर्षीय तथा क्रमागत रुपमा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम तय गर्ने बताइएको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा विभिन्न मन्त्रालयसँगको चरणबद्ध छलफलपश्चात् प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० करोडसम्मको एकसहित ५० लाखदेखि १० करोडसम्मको तीनवटा योजना संकलन सुरु गरेको छ।
प्रदेशभरका सवै निर्वाचन क्षेत्रमा विहीबार र शुक्रबार संघीय सांसद्, प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहभागितामा योजना छनाेट गरिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले जानकारी दिए।
‘योजना छनाेट प्रक्रियालाई बढीभन्दा बढी सहभागितामूलक बनाउन हामीले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर योजना छनाेट गरेका हौं।’,
उनले निर्वाचन क्षेत्रमा छनाेट भएका योजनासम्बन्धी मन्त्रालयमार्फत् योजना बैंकमा समावेश हुनुपर्ने बताए। ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण भइसकेको योजनालाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन हुनेछ’, उपाध्यक्ष डा. देवकोटाले भने। एक करोडभन्दा कम लागत अनुमान भएको योजनाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने गरी काम गरिने उनले बताए।
‘प्रदेश सरकार सानासाना योजनाभन्दा पनि ठूला र बढी प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले एक करोडभन्दा कम लागतको योजना स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो’, उनले भने।